Siyaabaha Loo Bartilmaameedsado Shabakadaada taraafikada | Martech Zone
Siyaabaha Loo Bartilmaameedsado Shabakadaada taraafikada
Talaado, Nofeembar 8, 2011 Douglas Karr
Waxaan ka dambeyney qaabeynta qaabkeena mobilada iyo iPad-ka ee mawduuca cusub ee Martech… waa shaqeysaa, in kastoo! Hal shay doono ogeysiiska ayaa ah, iyada oo ku saleysan kala soocista boostada, waxaan ku haynaa xayeysiisyo kala duwan bogga. Waxaan tan ku samaynay adoo habaynay aaladdayada aan isticmaalno oo firfircoon iSocket meeleynta is-adeegga ee xayeysiiska.
Waxaa jira siyaabo badan oo dheeri ah oo lagu bartilmaameedsado dhagaystayaashaaga marka loo eego aaladda ay adeegsanayaan, in kastoo, iyo infoorradan ka socota Monetate ayaa iyaga la hadlaysa. Qiyaasta celceliska dalabka dhowaan, goobta, booqashada soo noqnoqoshada, nidaamka qalliinka, cimilada, badeecooyinka ama bogagga la arkay iyo xitaa masaafada xaruntaada fulinta (ama goobta xafiiska) ayaa loo isticmaali karaa in lagu habeeyo waayo-aragnimada oo la kordhiyo heerarka jawaabta.
Laga soo bilaabo infographic: Bartilmaameedka taraafikada websaydhka qaybta macaamiisha si loo hagaajiyo sicirka beddelka waxaa sameeya oo keliya 25% ee suuqgeyaasha dijitaalka ah maanta. In yar oo la bar-tilmaameedsado sida loo ogaado, suuqleyntu waxay bilaabi karaan inay qaabeeyaan khibrad websaydh ah booqde kasta. Bartilmaameedsigu wuxuu ka faa'iideysan doonaa macaamiisha iyada oo la abuurayo wax ku ool wax ku ool ah, khibrad u leh dukaamaysiga internetka ee shaqsiyan loo qoondeeyay oo keenaya beddelaad sare
Waxaa kuu keenay: Monetate - madal suuq geyn dijitaal ah oo aad u adeegsan karto si aad ugu tijaabiso uguna dirto garoomo badeecado gaar ah, farriimo, iyo astaamo, meel kasta, bog kasta, oo ku saleysan wax kasta oo aad ka ogtahay booqdaha booqanaya boggaas.
Tags: beegsiga habdhaqankabar-tilmaameedkataariikhda iibsashadabartilmaameedkabeegsiga cimilada
Yuu Kuu Dhigay?
Email ugu soo dir Dhaqanka ugu Fiican Xilliga Fasaxa
Nov 8, 2011 saacadu markay tahay 4:45 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida noo infographic, Douglas! Runtii waad ku mahadsan tahay.